ဘဝမှာ ကျရှုံးမှုတွေနဲ့ ရင်မဆိုင်ရသေးခင် အထူးဂရုစိုက်ရမယ့် အချက် ( ၁၀ ) ချက် – Tameelay
ဘဝမှာ ကျရှုံးမှုတွေနဲ့ ရင်မဆိုင်ရသေးခင် အထူးဂရုစိုက်ရမယ့် အချက် ( ၁၀ ) ချက်
ကျရှုံးမှုဆိုတာ အလွန်စွမ်းအားကြီးမားတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အကြံ့ခိုင်ဆုံးသောသူတွေကိုတောင် တွေးမိရုံနဲ့ တုန်လှုပ်သွားစေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျရှုံးမှုဟာ ဘဝရဲ့ မပါမဖြစ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျရှုံးမှုကို မကြုံတွေ့ဖူးနဲ့တော့ အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျရှူံးမှုက ကျွန်တော်တို့ကို သင်ခန်းစာတွေ အများကြီးရစေပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘယ်သူမှ ပြီးပြည့်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကျရှုံးမှုတွေကို ကြုံတွေ့ဖူးပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ ယခုအခါမှာတော့ ကျရှုံးမှုဆီကို ဦးတည်သွားစေတဲ့ အပြုအမူတွေကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ အထူးအာရုံထား ဖတ်ရှုသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးဖြစ်လို့ ကြည့်ကြရအောင်
၁။ အလုပ်ကို အာရုံမစိုက်ဘူး
လူတိုင်းလူတိုင်း ဒီအချက်ကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ မိသားစု ကိစ္စ၊ relationship ကိစ္စတွေ၊ အခြား အလုပ်နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို အလုပ်ဆီသယ်လာတယ်။ အဲ့သည်အခါ အလုပ်ကို အပြည့်အာရုံမစိုက်တော့ဘူး။ ချောင်ခိုကပ်လာမယ်။ Social media တွေကို သုံးလာမယ်၊ အခြား အလုပ်နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အရာတွေပေါ်မှာဘဲ အာရုံများလာတယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကတော့ အလုပ်ကထုတ်ခံရမယ်၊ မိမိကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဆိုရင် ကျရှုံးမယ်။ အလုပ်မှာ အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းလာတဲ့အခါ အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်းကတော့ အခြားစိတ်ပြန့်လွင့်စေတဲ့အရာတွေနဲ့ အဝေးမှာနေပြီး Motivation ရအောင်၊ စိတ်ဝင်စားမှုရအောင် ပြန်လည်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၂။ အလွယ်တကူ အလျော့ပေးတယ်
အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ အရာအားလူံးဟာ ခက်ခဲလာပါတယ်။ ပြီး အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုရင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားဖို့ လိုအပ်လာတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ များပြားလာတယ်။ သင့်အိမ်မက်က ကြီးမားလေလေ ကျရှုံးမှုတွေကို ကြုံတွေ့ရလေလေပါ။ ဒါ့ကြောင့် လဲကျရင် ပြန်ထပါ၊ ထပ်ကြိုးစားပါ၊ ပိုကောင်းအောင် ပြင်ဆင်ပါ။ ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးပါနဲ့၊ လက်မလျှော့ပါနဲ့။
ကျရှုံးရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထဲက တခုကတော့ အချိန်ဆွဲခြင်းပါဘဲ။ အချိန်မှီ မပြုပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင် အကျင့်တခုလို ဖြစ်လာပြီး နေ့စဉ်အလုပ်တွေကိုပါ ထိခိုက်လာစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘာဘဲလုပ်လုပ် အချိန်မဆွဲပါနဲ့၊ လုပ်စရာရှိရင် ချက်ချင်းလုပ်ပါ၊ နေ့ဆွဲညဆွဲမလုပ်ပါနဲ့
၄ ။ ဖြစ်လိုစိတ်၊ အောင်မြင်လိုစိတ် မပြင်းပြဘူး
အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် အောင်မြင်လိုစိတ်၊ ဖြစ်လိုစိတ် ပြင်းပြရပါတယ်။ ဖြစ်လိုစိတ်မရှိမှတော့ သင့်ကိုဘယ်သူတွေဘဲ ဆွဲခေါ်နေပါစေ ချီးမြှောက်နေပါစေ အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီး ပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်တွေကျလာတယ်၊ ဖိအားတွေ ဝင်လာတယ်။
၅။ မရှုပ်ထွေးတဲ့အရာတွေကို ရှုပ်ထွေးစေတယ်
သင်ဟာ မပြီးသေးတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အတွေးလွန်တဲ့သူတယောက်လား? အဖြေက ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ပြဿနာတွေကို ကြုံတွေ့နေရတာဟာ ဒီအချက်ကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ အတွေးလွန်ခြင်းဟာ မလိုလားအပ်တဲ့ စိတ်ဖိအားတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ပြီး နာရီပိုင်းအတွင်းပြီးရမယ့် အလုပ်တခုဆို နာရီပေါင်းများစွာ ကြာသွားစေပါတယ်။ သိထားရမှာက ဘာဘဲလုပ်လုပ် အလုပ်မှာကော ဘဝမှာပါ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလုပ်ပါ၊ သိုသိုသိပ်သိပ်နေထိုင်ပါ။ မရှုပ်ထွေးစေပါနဲ့။ ပြဿနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေ ကြုံလာရင် ထင်သလောက်ခက်ခဲမှာမဟုတ်ဘူး လို့ မိမိကိုယ်ကို သတိပေးပါ။ စိုးရိမ်စိတ်မများပါနဲ့၊ အလုပ်ကြိုးစားပါ။
၆။ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းမှာ ညံ့ဖျင်းတယ်
လူအများစု မှားတတ်ကြတဲ့ အမှားဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းတဲ့အခါ အကြွေးတင်လာမယ်၊ အရေးပေါ်ကိစ္စတွေအတွက် သုံးငွေမရှိဘူး၊ အငြိမ်းစားယူတဲ့အခါ သုံးဖို့ငွေအလုံအလောက်မရှိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ငွေကြေးသုံးစွဲမှုအပိုင်းကို အထူးဂရုပြုပါ၊ ငွေစုပါ၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံပါ။
၇။ မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ ဝန်းရံထားတယ်
လူတယောက်က ဘယ်သူလဲ? ဆိုတဲ့အချက်ကို သူဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလဲ? ဆိုတာကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဘဝမှာ အောင်မြင်ချင်ရင် အပေါင်းအသင်းကို အထူးဂရုစိုက်ပါ။ မိမိအိမ်မက်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေ၊ အိမ်မက်တူ ရည်မှန်းချက်တူတဲ့သူတွေ၊ အောင်မြင်တဲ့သူတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ။ အပေါင်းအသင်းမှားတာနဲ့ သင့်ဘဝကြီး ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတာကို ခေါင်းထဲထည့်ထားပါ။
၈။ အတိတ်က အမှားတွေဆီကနေ မသင်ယူဘူး
အမှားတွေ၊ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေဆီကနေ သင်ခန်းစာယူဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နောက်တကြိမ်ကြိုးစားတဲ့အခါ အမှားတခုထဲကိုဘဲ ထပ်ခါတလဲလဲမမှားနိုင်အောင်လို့ပါ။ ပြီး အခြားသူတွေရဲ့ အမှားတွေဆီကနေလည်း သင်ခန်းစာယူရမယ်။ မိမိအမှားကိုသိလို့ အမှန်ကိုပြင်ပြီး ထပ်မံကြိုးစားတဲ့ခါ သင်ပိုပြီး ရင့်ကျက်လာမယ်၊ ပိုပြီး စိတ်ဓာတ်တွေ တတ်ကြွလာမယ်။ အမှားလုပ်မိရင် စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့၊ အမှားဆီကနေ သင်ခန်းကိုရအောင်ယူပါ။
၉။ အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းတယ်
ဆုံးရှုံးဖို့ အလွယ်ကူဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဘဝမှာ အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် အချိန်ကို ကောင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲတတ်ရပါမယ်။ အချိန်စီမံဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ နေ့စဉ်အချိန်ဇယားဆွဲပြီး တိတိကျကျလိုက်နာခြင်းပါဘဲ။
၁၀။ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု နည်းပါတယ်
မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု မရှိဘူးဆိုရင် ဘဝမှာ ကျရှုံးမှာပါဘဲ။ ဒါ့ကြောင့် အမြဲ မိမိကိုယ်ကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး လေးစားမှုအပြည့်ထားပါ။ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုအပြည့်ရှိရင် ယုံကြည်မှုရှိရင် ဘယ်အရာကိုမဆို အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
Credit – Toptenteam
Unicode Readဘဝမှာ ကရြှုံးမှုတှနေဲ့ ရငျမဆိုငျရသေးခငျ အထူးဂရုစိုကျရမယျ့ အခကျြ ( ၁၀ ) ခကျြ
ကရြှုံးမှုဆိုတာ အလှနျစှမျးအားကွီးမားတဲ့ အရာဖွဈပါတယျ။ သူဟာ အကွံ့ခိုငျဆုံးသောသူတှကေိုတောငျ တှေးမိရုံနဲ့ တုနျလှုပျသှားစတောပါ။ ဒါပမေယျ့ ကရြှုံးမှုဟာ ဘဝရဲ့ မပါမဖွဈတဲ့ အစိတျအပိုငျး ဖွဈပါတယျ။ ကရြှုံးမှုကို မကွုံတှဖေူ့းနဲ့တော့ အောငျမွငျမှုရဖို့ဆိုတာ ဘယျလိုမှ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ကရြှူံးမှုက ကြှနျတျောတို့ကို သငျခနျးစာတှေ အမြားကွီးရစပေါတယျ။ ကမျဘာကွီးမှာ ဘယျသူမှ ပွီးပွညျ့တယျဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့အားလုံး ကရြှုံးမှုတှကေို ကွုံတှဖေူ့းပွီးသားဖွဈကွမှာပါ။ ယခုအခါမှာတော့ ကရြှုံးမှုဆီကို ဦးတညျသှားစတေဲ့ အပွုအမူတှကေို ဖျောပွပေးသှားပါမယျ။ အထူးအာရုံထား ဖတျရှုသငျ့တဲ့ အကွောငျးအရာလေးဖွဈလို့ ကွညျ့ကွရအောငျ
၁။ အလုပျကို အာရုံမစိုကျဘူး
လူတိုငျးလူတိုငျး ဒီအခကျြကို ကွုံဖူးကွမှာပါ။ မိသားစု ကိစ်စ၊ relationship ကိစ်စတှေ၊ အခွား အလုပျနဲ့ မသကျဆိုငျတဲ့ ကိစ်စတှကေို အလုပျဆီသယျလာတယျ။ အဲ့သညျအခါ အလုပျကို အပွညျ့အာရုံမစိုကျတော့ဘူး။ ခြောငျခိုကပျလာမယျ။ Social media တှကေို သုံးလာမယျ၊ အခွား အလုပျနဲ့ မသကျဆိုငျတဲ့ အရာတှပေျေါမှာဘဲ အာရုံမြားလာတယျ။ အကြိုးဆကျအနနေဲ့ကတော့ အလုပျကထုတျခံရမယျ၊ မိမိကိုယျပိုငျအလုပျဆိုရငျ ကရြှုံးမယျ။ အလုပျမှာ အာရုံစူးစိုကျမှုနညျးလာတဲ့အခါ အကောငျးဆုံး ဖွရှေငျးနညျးကတော့ အခွားစိတျပွနျ့လှငျ့စတေဲ့အရာတှနေဲ့ အဝေးမှာနပွေီး Motivation ရအောငျ၊ စိတျဝငျစားမှုရအောငျ ပွနျလညျကွိုးစားခွငျးဖွဈပါတယျ။
၂။ အလှယျတကူ အလြော့ပေးတယျ
အသကျအရှယျရလာတာနဲ့အမြှ အရာအားလူံးဟာ ခကျခဲလာပါတယျ။ ပွီး အောငျမွငျမှုရဖို့ဆိုရငျ ပွငျးပွငျးထနျထနျကွိုးစားဖို့ လိုအပျလာတယျ။ ယှဉျပွိုငျမှုတှေ မြားပွားလာတယျ။ သငျ့အိမျမကျက ကွီးမားလလေေ ကရြှုံးမှုတှကေို ကွုံတှရေ့လလေပေါ။ ဒါ့ကွောငျ့ လဲကရြငျ ပွနျထပါ၊ ထပျကွိုးစားပါ၊ ပိုကောငျးအောငျ ပွငျဆငျပါ။ ဘယျတော့မှ အရှုံးမပေးပါနဲ့၊ လကျမလြှော့ပါနဲ့။
ကရြှုံးရတဲ့ အကွောငျးအရငျးတှထေဲက တခုကတော့ အခြိနျဆှဲခွငျးပါဘဲ။ အခြိနျမှီ မပွုပွငျနိုငျဘူးဆိုရငျ အကငျြ့တခုလို ဖွဈလာပွီး နစေ့ဉျအလုပျတှကေိုပါ ထိခိုကျလာစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဘာဘဲလုပျလုပျ အခြိနျမဆှဲပါနဲ့၊ လုပျစရာရှိရငျ ခကျြခငျြးလုပျပါ၊ နဆှေဲ့ညဆှဲမလုပျပါနဲ့
၄ ။ ဖွဈလိုစိတျ၊ အောငျမွငျလိုစိတျ မပွငျးပွဘူး
အောငျမွငျဖို့ဆိုရငျ အောငျမွငျလိုစိတျ၊ ဖွဈလိုစိတျ ပွငျးပွရပါတယျ။ ဖွဈလိုစိတျမရှိမှတော့ သငျ့ကိုဘယျသူတှဘေဲ ဆှဲချေါနပေါစေ ခြီးမွှောကျနပေါစေ အောငျမွငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ပွီး ပွဿနာတှေ ကွုံတှလေ့ာရတဲ့အခါ စိတျဓာတျတှကေလြာတယျ၊ ဖိအားတှေ ဝငျလာတယျ။
၅။ မရှုပျထှေးတဲ့အရာတှကေို ရှုပျထှေးစတေယျ
သငျဟာ မပွီးသေးတဲ့ အလုပျတှနေဲ့ပတျသတျပွီး အတှေးလှနျတဲ့သူတယောကျလား? အဖွကေ ဟုတျတယျဆိုရငျတော့ သငျပွဿနာတှကေို ကွုံတှနေ့ရေတာဟာ ဒီအခကျြကွောငျ့လညျး ပါပါတယျ။ အတှေးလှနျခွငျးဟာ မလိုလားအပျတဲ့ စိတျဖိအားတှကေို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ ပွီး နာရီပိုငျးအတှငျးပွီးရမယျ့ အလုပျတခုဆို နာရီပေါငျးမြားစှာ ကွာသှားစပေါတယျ။ သိထားရမှာက ဘာဘဲလုပျလုပျ အလုပျမှာကော ဘဝမှာပါ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးလုပျပါ၊ သိုသိုသိပျသိပျနထေိုငျပါ။ မရှုပျထှေးစပေါနဲ့။ ပွဿနာတှေ၊ အခကျအခဲတှေ ကွုံလာရငျ ထငျသလောကျခကျခဲမှာမဟုတျဘူး လို့ မိမိကိုယျကို သတိပေးပါ။ စိုးရိမျစိတျမမြားပါနဲ့၊ အလုပျကွိုးစားပါ။
၆။ ငှကွေေးစီမံခနျ့ခှဲမှုအပိုငျးမှာ ညံ့ဖငျြးတယျ
လူအမြားစု မှားတတျကွတဲ့ အမှားဖွဈပါတယျ။ ငှကွေေးစီမံခနျ့ခှဲမှုညံ့ဖငျြးတဲ့အခါ အကွှေးတငျလာမယျ၊ အရေးပျေါကိစ်စတှအေတှကျ သုံးငှမေရှိဘူး၊ အငွိမျးစားယူတဲ့အခါ သုံးဖို့ငှအေလုံအလောကျမရှိဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ ငှကွေေးသုံးစှဲမှုအပိုငျးကို အထူးဂရုပွုပါ၊ ငှစေုပါ၊ ရငျးနှီးမွှပျနှံပါ။
၇။ မကောငျးတဲ့သူတှနေဲ့ ဝနျးရံထားတယျ
လူတယောကျက ဘယျသူလဲ? ဆိုတဲ့အခကျြကို သူဘယျသူနဲ့ပေါငျးလဲ? ဆိုတာကိုကွညျ့ပွီး ဆုံးဖွတျနိုငျပါတယျ။ ဘဝမှာ အောငျမွငျခငျြရငျ အပေါငျးအသငျးကို အထူးဂရုစိုကျပါ။ မိမိအိမျမကျကိုယုံကွညျတဲ့သူတှေ၊ အိမျမကျတူ ရညျမှနျးခကျြတူတဲ့သူတှေ၊ အောငျမွငျတဲ့သူတှနေဲ့ မိတျဆှဖှေဲ့ပါ။ အပေါငျးအသငျးမှားတာနဲ့ သငျ့ဘဝကွီး ပကျြစီးသှားမယျဆိုတာကို ခေါငျးထဲထညျ့ထားပါ။
၈။ အတိတျက အမှားတှဆေီကနေ မသငျယူဘူး
အမှားတှေ၊ဆုံးဖွတျခကျြအမှားတှဆေီကနေ သငျခနျးစာယူဖို့ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နောကျတကွိမျကွိုးစားတဲ့အခါ အမှားတခုထဲကိုဘဲ ထပျခါတလဲလဲမမှားနိုငျအောငျလို့ပါ။ ပွီး အခွားသူတှရေဲ့ အမှားတှဆေီကနလေညျး သငျခနျးစာယူရမယျ။ မိမိအမှားကိုသိလို့ အမှနျကိုပွငျပွီး ထပျမံကွိုးစားတဲ့ခါ သငျပိုပွီး ရငျ့ကကျြလာမယျ၊ ပိုပွီး စိတျဓာတျတှေ တတျကွှလာမယျ။ အမှားလုပျမိရငျ စိတျဓာတျမကပြါနဲ့၊ အမှားဆီကနေ သငျခနျးကိုရအောငျယူပါ။
၉။ အခြိနျစီမံခနျ့ခှဲမှု ညံ့ဖငျြးတယျ
ဆုံးရှုံးဖို့ အလှယျကူဆုံးအရာဖွဈတဲ့ အခြိနျကို စီမံခနျ့ခှဲတတျဖို့ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။ ဘဝမှာ အောငျမွငျခငျြတယျဆိုရငျ အခြိနျကို ကောငျးစှာ စီမံခနျ့ခှဲတတျရပါမယျ။ အခြိနျစီမံဖို့ အကောငျးဆုံး နညျးလမျးကတော့ နစေ့ဉျအခြိနျဇယားဆှဲပွီး တိတိကကြလြိုကျနာခွငျးပါဘဲ။
၁၀။ မိမိကိုယျကိုလေးစားမှု နညျးပါတယျ
မိမိကိုယျကိုလေးစားမှု မရှိဘူးဆိုရငျ ဘဝမှာ ကရြှုံးမှာပါဘဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ အမွဲ မိမိကိုယျကို ရှတေ့နျးတငျပွီး လေးစားမှုအပွညျ့ထားပါ။ မိမိကိုယျကိုလေးစားမှုအပွညျ့ရှိရငျ ယုံကွညျမှုရှိရငျ ဘယျအရာကိုမဆို အောငျမွငျနိုငျပါတယျ။
အောင်မြင်ရေး အတွက် နည်းလမ်းလေး ၁၀ခု
မေးလ်တစ်ခုကနေပို့ထားတာလေးကို အားလုံးဖတ်လို့ရအောင်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အောင်မြင်ရေး နည်းလမ်း ၁၀ခုကို မှတ်ရလွယ်အောင် အင်္ဂလိပ်လို စီ-ဆယ်လုံးလို့ သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့- ၁။ Construction = တည်ဆောက်ခြင်း ၂။ Competence = အစွမ်းအစရှိခြင်း ၃။ Courage = သတ္တိရှိခြင်း ၄။ Communication = …
မိန်းမတွေကို ပျက်စီးစေတတ်သော အချက် (၁၃) ချက်
မိန်းမတွေကို ပျက်စီးစေတတ်သော အချက် (၁၃) ချက် ၁။ ကိစ္စ လုပ်ငန်းတိုင်း၌ ကိုယ်တိုင် စိုးမိုး လုပ်ကိုင် အာဏာပိုင် ပြဋ္ဌာန်းမှု ရနေခြင်း ။ ၂။ ဖခင်၏ အုပ်ထိန်းမှု လက်အောက်၌သာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ နေထိုင်ခဲ့ရခြင်း ။ ၃။ အထူးထူးသော ပွဲလမ်းသဘင်တို့၌ …
တခါတုန်းက စီးပွားရေးသမား တစ်ယောက်ဟာ စီးပွားပျက်သွားတဲ့အတွက် ငွေကြေးအမြောက်အမြား လိုအပ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရေးပေါ် ငွေကြေးလိုအပ်နေတဲ့အတွက် သူဟာ ဟူရွှယ်ယင်လို့ ခေါ်တဲ့ သူဋ္ဌေးတစ်ဦးနဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ စက်ရုံကို လျော့ဈေးနဲ့ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟူရွှင်ယင်ကတော့ ဒုက္ခရောက်တဲ့ သူ့ကို လျစ်လျူ ရှုခြင်း လုံးဝမရှိပဲ …